सा`बधा`न ! अब को`रोना सं`क्रमित भा`गेमा सु`रक्षाकर्मीले गो`ली समेत हा`न्न पाउने । – Namaste Dainik
May 15, 2020 May 15, 2020 NamastedainikLeaveaComment on सा`बधा`न ! अब को`रोना सं`क्रमित भा`गेमा सु`रक्षाकर्मीले गो`ली समेत हा`न्न पाउने ।
काठमाडौँ ।पर्सामा को`रोना सं`क्रमित भागेमा सु रक्षा कर्मीले गो`ली समेत हा न्न पाउने भएका छन् । बुधबार सं`कट व्यव स्था पन के`न्द्रको बै`ठकले सुर क्षाक र्मीहरू लाई अ स्प तालबाट भा ग्ने को`रोना सं`क्रमितलाई गो`ली हा`न्ने अधिकार दिएको हो ।
सो निर्य को बारेमा पर्साका एसपी गंगा पन्तले पुष्टि गरेकी छिन् । हिजोको बैठकले हामीलाई अ`धिकार दिएको हो,एसपी पन्तले भनिन् । गत बुधबार वीरगञ्जको नारायणी उप`क्षेत्रीय अ`स्पतालबाट शौ चालय जाने बहा नामा दुई जना सं`क्रमित भे न्टि लेसन फो`डेर भागेका थिए ।
प्र`हरीले उनीहरूलाई सोही दिन प`क्राउ गरेको थियो । उक्त घ`टनालाई म ध्यन जर गर्दै केन्द्रले अस्प´तालबाट भाग्न नदिन यस्तो निर्णय गरेको हो । सुरक्षाकर्मीलाई सं`क्रमित भा गेमा नि यन्त्रण लिन आव श्यक ता अनुसा र ब ल प्रयोबग गर्ने तथा गो`ली समेत च ला उन पाउने अधि`कार दिने नि`र्णय गरेको हो ।
उक्त बैठकको अध्य क्षता प्रमुख जिल्ला अ`धिकारी विष्णुकुमार कार्कीले गरेका थिए । बै ठकमा नार यणी अ स्पतालका डा.मदन उपाध्याय,प्रमुख सेनानी मदनजंग राणा,प्र`हरी उपरीक्षक गंगा पन्त,स स्त्र प्र`हरी उपरीक्षक दिपेन्द्र कुँवर लगायत स हभागी थिए ।